Samawade Seeraar – Kaasho Maanka
Asalka Nolosha (Origin of life)
Qaybta: Aragtiyo, Cilmiga xiddigiska, Saynis, Xulka
Saynisyahannadu waxay isku raacsan yihiin muddo laga joogo 4.6 bilyan sanno ka hor in daruur boodh-gaaseed oo cufnaan badan leh heehaabaysa fagaagga oo la yidhaa SOLAR NEBULA ay isku duntay markii ay soo gaadheen xoogag ka soo firdhaday xidigo qarxay oo la jaar ahaa. Arintaasi oo garabsanaysa cufis-jiidadku waxay keentay in wareeg ay sameyso daruur-gaaseedkii isla markaana qaab dhismeedkeedi uu...
GAWRICII KIISHA | Bal ila sawiro akhriste !
Qaybta: Aragtiyo, Nabi Maxamed, Uncategorized
Waxad ahayd wiil yar oo dagana magaalo KIISHA la yidhaa oo dhashay sanadku markuu ahaa 620 (miilaadi). laba jir adoo ah magaaladiina waxa soo galay nin reerkiisii ka soo cararay oo la soo caydhiyay. reerka aad ka dhalatay iyo laba reer oo kale ayaa ku heshiiyay inay ninkan la soo caydhiyay si nabdoon magaalada u soo galiyaan oo aanay dib ugu celin reerkiisii. ninkan wuxu Sheeganayaa inuu yahay...
Aragtida Qaraxa Wayn waa xaqiiqo Cilmiya “Big Bang theory”
Guud ahaan diimuhu waxay si adag u diidaan aragtidan inkastoo ay jiraan diimo isla rogroga waxyaabaha uu saynisku shaaca ka qaado. Hadana kuwa ka run sheega nusuusta ay wataan ma ogola dhaqankaa jirjiroolaynta ah. Inta badan marka aad maqaal aqooneed akhrinayso waxa quman inaanad si toos ah u liqin macluumaadka laguu sheegayo. Markaa akhriste waxan kaa codsanayaa inaad iska shaandhayso...
Qaybta: Aragtiyo, Awood sare, Cilmu-nafsiga, Diimaha, Xulka
Diin-laawe, Alla-kood, mulxid ama atheist, luqada aad doonto ku sheegoo weedhan waxa loo adeegsada qof Diiday jiritaanka awood sare sidoo kale wax diin ah aanan ku dhaqmin. Meerisyada soo socda waxan kuu kaxayn doona safar gaaban oo ujeedkiisu yahay inaan iftiimiyo sababta aan dadkoo dhan ugu tilmaamay diin-laawayaal.
Maxaan u rumaynay “ILAAH”?
Qaybta: Awood sare
Kumannaan ilaah ayaa lagu soo caabuday adduunka. Wotan (ama Odin) wuxuu ahaa ilaaha weyn ee Vikings-ka. Ilaahyada kale ee Viking-ka waxay ahaayeen Baldr (Ilaaha quruxda), Thor (Ilaaha onkodka) iyo gabadhiisa Throd. Snotra (Ilaahadda xigmadda), Frigg (Ilaahadda hooyanimada) iyo Ran (Ilaahadda badaha). Greeks-ku sidoo kale waxay ahaayeen polytheistic (Mushrikiin), ilaahyadoodi waxa kamid ahaa, Zeus...
Xulashada Dabeecadda (Natural Selection)
Noole kasta waxa aasaas u ah (DNA) oo laga dhaxlo labada waalid. DNA-du waxay ka koobantahay afar qayb dhismeedyo oo loo yaqaan Nucleotides kala ahna [ Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G) iyo Cytosine (C) ]. Qayb-dhismeeyda aynu sheegnay labo-labo ayay isugu xidhmaan, tusaale : (A-T), (C-G), (A-T) iyo (G-C). Qaabka ay u habaysan yihiin (Isugu xig-xigaan) ayaa u taagan macluumaad (Cord) oo...